ODP: Waajjirri mootummaa Oromiyaa namoota afaan Oromoo barreessuu hin dandeenye mindeessee nu salphisaa jira. - Kichuu
HomeNewsODP: Waajjirri mootummaa Oromiyaa namoota afaan Oromoo barreessuu hin dandeenye mindeessee nu salphisaa jira.
ODP: Waajjirri mootummaa Oromiyaa namoota afaan Oromoo barreessuu hin dandeenye mindeessee nu salphisaa jira.
Waajjirri mootummaa Oromiyaa namoota afaan Oromoo barreessuu hin dandeenye mindeessee nu salphisaa jira. Dhugumatti ilmaan Oromoo ulaagaa kana guutan dhabaniitii kan namoota akkanaa mindeessaniif? ODP keessa bukoon hedduun akka jiru wantoota mul’isan keessaa kuni tokko.Ferhan Abdulselam
Ani facebook gubbaan laqalaqa kanaaf namni mindaa narraa kutu hin jiru yoon Qubee dogoggores. Laalaa, namoonni ergaa armaan gadii barreessan akkasi hojii mootummaa keessa akkamitti seenan? Mindaa argachaa hojjatu jechuudhaa? Namni beekumsa, qaroomina fi dandeetti bu’uuraa barreessu malee akkamitti ummata tajaajila? Nama akkasitti maalif qarshiin ummataa qisaasama? Beekaa kuni waajjira sab-qunnamtii (communication) keessa dha, waajjiraale biro maal gubbaa akka jiran Waaqa qofatu beeka. Hunda ishii haarcaasudha. Yookan leenji fudhatani dandeetti yaa argatan, yoo ‘hin barbaannu’ jedhan hojiirraa arii’u.
Page kuni page sirrii kan BMNOti.
Ayantuu Robaa Oromoo
New Afaan Oromoo Music /irrecha 2019/Abbichu Band
Bilisummaan Oromoo ammuma haa dhugoomu!!